Forex ma xiran tahay? Ku Ganacsi Cryptocurrency Iyadoo VfxAlert Signals | vfxAlert official blog
Ma ubaahantahay faa iido dheeri ah oo Forex way xirantahay?
Ganacsatada waad salaaman tihiin! Adigoo furaya ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxaad ku kasban kartaa macaash daqiiqado yar gudahood. Laakiin sida lacag looga sameeyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah maalmaha ciidaha iyo dhamaadka usbuuca, marka lacagta iyo suuqyada saamiyada la xidho? Tani way fududahay in lagu sameeyo cryptocurrencies oo la heli karo 24 saacadood / 7 maalmood usbuucii.
Cudurka faafa ee 'COVID-19' wuxuu dhibaato ku keenay ku dhowaad dhammaan qeybaha dhaqaalaha dhabta ah, taasoo kalliftay sare u kac ku yimid xiisaha xulashooyinka maalgashiga ee kale sida lacagta dhijitaalka ah.
Laakiin, meeday dammaanadqaadkii in wax walba aysan u noqon doonin eber, maxaa yeelay badankood waxaa bixiya oo keliya suuqgayn iyo yididiilo horumarineed. Su’aasha ugu muhiimsan ayaa ah waa maxay xeeladaha lagu ganacsado? Isticmaal qalab caadi ah ama raadi "farsamooyinka qoraaga iyo ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah" oo u qalma lacag badan?
Aynu eegno dhowr ikhtiyaar oo lacag lagu kasbado xeeladaha waqtiga la tijaabiyay, sidoo kalena aan isku dayno inaan saadaal ka dhigno nuska hore ee 2021 ee waxyaabaha loo yaqaan 'cryptocurrencies' waaweyn.
Seeraar ayaa kordhaya. Qiimo cusub oo taariikhi ah oo cusub ayaa la dejiyay, mugga iibka ayaa ku sii kordhaya dhammaan is-weydaarsiga, maal-galiyayaal badan oo hay'ado ah ayaa ka fiirsanaya hantidan inay tahay qayb muhiim ah oo ka mid ah maal-gashigooda sanadka 2021.
Bitcoin way baayactireysay waqti dheer, qaababka laambadda ayaa si fiican uga shaqeynaya, kuwaas oo lagu talinayo in lagu kabo istiraatiijiyad ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ku saleysan tilmaamayaasha farsamada, sida vfxAlert sameeyo.
Waqtiga: Mid kasta oo ka mid ah inta u dhexeysa M1-M5. Xaaladdeenna, M1 waa la isticmaalay, laakiin muddada falanqaynta ee sii kordheysa, saxnaanta calaamaddu way sii kordheysaa.
Hantida ganacsiga: Lacag kasta oo lacag ah. Shuruudda ugu weyn waa go'an (2-3 dhibic) faafitaan iyo lacag la'aan qarsoon.
Waqtiga ganacsiga: Dhammaan kulammada ganacsiga ee Forex.
Xulashada khidmadda boqolkiiba: Aan ka yarayn 70-75%.
Celceliska Dhaqdhaqaaqa iyo oscillator.
Dhacdada ugu weyn ee Sannadka Cusub waxay noqon doontaa bilowga ganacsiga mustaqbalka ee Ethereum ee Suuqa Ganacsiga ee Chicago, halkaas oo ay ku noqon doonto tartan dhab ah Bitcoin. Suurtagalnimada sii socoshada hore waa mid sare; waxaad bilaabi kartaa raadinta dhibcaha dhaqaaqa ee CALL-ikhtiyaarka adoo adeegsanaya tilmaamayaasha isbeddelka.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa tilmaamayaasha farsamada caadiga ah:
Celcelis ahaan saddex celcelis ahaan (EMA) oo leh 10, 25 iyo 50. Go'aaminta jihada isbeddelka muddada-dhow iyo muddada-dhexe. On biibiile leh isbeddel sarreeya, waxaad isticmaali kartaa kanaalka qiimaha, gudaha aad ku dhex ganacsan karto (ugu yaraan 10-15 dhibcood ballaaran). Burburku wuxuu noqon doonaa calaamad ganacsi oo ku saabsan isbeddel cusub. Habkani waxaa lagula talinayaa oo kaliya ganacsatada qibrada leh!
MACD. Tilmaamahan wuxuu u shaqeeyaa labadaba isbeddel ahaan iyo sida qalab oscillator ah, sidaas darteed waxay noqon doontaa calaamadda ugu dambeysa ee lagu furo ikhtiyaar.
CALL-xulasho . Qiimuhu wuu ka sarreeyaa dhammaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama wuxuu ku jabayaa "dhakhso" EMA (10) xagga hoose ilaa kor. MACD waa cagaar oo ka sarreeyaa eber.
Dooro-xulasho . Xaaladaha dib udhaca: qiimaha ayaa ka hooseeya dhamaan Celceliska Dhaqdhaqaaqa ama jabiya EMA (10) kor ilaa hoos. MACD waa casaan oo eber ka hooseeya.
Fursadaha ka fur xadka kanaalka.
Isbeddelku wuxuu sii socon doonaa inuu ka gudbo Bitcoin iyada oo lagu jiro xilliyada dhaqdhaqaaqa dhinac walba ah, halkaas oo aad ka furan karto ganacsiyada xuduudaha kanaalka qiimaha sida hoos ka muuqata
Tilmaamaha Donchian laguma darin aasaasiga aasaasiga ah ee dhuxusha ganacsiga. Laakiin si fudud ayaa bilaash looga heli karaa internetka.
Stochastic - oscillator wuxuu qiimeyn doonaa isku dheelitirka hadda ee u dhexeeya iibsadayaasha iyo iibiyeyaasha: saadaaliyaha ka sarreeya heerka 80 - dhammaadka kor u kaca (xad dhaafka ah), ka hooseeya 20 - dhammaadka hoos u dhaca (kor loo qaaday).
On ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaariga ah iyo fursadaha furan marka shuruudaha soo socda la buuxiyo:
CALL-xulasho. Qiimaha dib ugu noqoshada xadka ugu hooseeya ee Channel Doncian ama ka gudub khadkiisa dhexe salka hoose ilaa sare. Stochastic waa kor ama waa laga badiyay (heerka 20);
Dooro-xulasho . Qiimuhu wuxuu ka gudbaa celceliska DC-ka kor ilaa hoose ama wuxuu ka soo baxaa xadka kore. Stochastic ayaa hoos u dhacday ama ka badatay (heerka 80);
Ka eeg xaaladda AltCoin oo saadaalinta 2021 fiidiyahayaga .
Waxaan lacag ka kasbannaa cryptocurrencies 24 saacadood / 7 maalmood usbuucii, markii suuqyada kale xiran yihiin;
In kasta oo xaraf yar la barbardhigo lammaanaha lacagta iyo hantida saamiyada, cryptocurrencies waa aalad ganacsi oo dhab ah oo siinaysa faa'iido wanaagsan oo deggan.
Ikhtiyaarka ikhtiyaari ikhtiyaari ah, waxaad u baahan tahay oo keliya deebaajiga ugu yar. Macna ma laha inta ay leegtahay lacagta loo yaqaan 'cryptocurrencies' inay ku qalanto sarrifka, waa ku filan tahay inaad sameyso saadaal saxa ah UP / DOWN oo aad macaash ka hesho.
La joog vfxAlert iyo calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah sanadka cusub!